Indlu enhle enokubukwa okuhlukile kwesigodi
Putanges-le-Lac, Normandie, i-France
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Claude
Itholakala endaweni yesigodi saseForêt Auvray eSuisse Normande, le ndlu iqhele ngamakhilomitha ayi-7 ukusuka eLake Rabodanges. Ibusa esigodini sase-Orne. Isilungiswe ngokuphelele, inendawo engu-130 m2 emazingeni angu-2 futhi ivula ngokuqondile i-panorama ebabazekayo yesigodi. Abanikazi banendlu yesibili esigodini. Yindlu ekahle yabathandi bemvelo abafuna ukuzola nokuvuselela kabusha.
Indlu itholakala ekugcineni kwedolobhana emaphethelweni omgwaqo oholela ku-GR46 osuka esigodini sase-Orne. I-Oriented East / West, ithola ukukhanya kwelanga okuhle kakhulu. Ehlangothini olusentshonalanga, inengadi kanye nethala elikhulu kakhulu elinelanga kuze kube kusihlwa. I-awning ikuvumela ukuthi udle ngaphandle.
4.97(30 okushiwo abanye)
Ngokuphambene nesonto, indawo yokudlela ejwayelekile kakhulu ingakwamukela futhi ikunikeze ubusuku obunetimu. Uma uthanda ukuhamba, ukuhamba kungenziwa ngokuqondile kusuka endlini kuya ngasesigodini kanye nase-Orne nasezindleleni ezishona phansi zethafa. Nsuku zonke kunezimakethe ezincane endaweni lapho unganambitha khona imikhiqizo yendawo.
Sizokwamukela ukuthi sikunikeze okhiye futhi sikubonise amakheli angcono kakhulu esifundeni.
UClaude Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Putanges-le-Lac namaphethelo